Barnaamijkii Tartan iyo Tacliin ee dugsiyada sare ee Puntland oo 5-ta bisha Ramadaan ka bilaaban doona Radio Daljir. – Radio Daljir
Barnaamijkii Tartan iyo Tacliin ee dugsiyada sare ee Puntland oo 5-ta bisha Ramadaan ka bilaaban doona Radio Daljir.
Luulyo 21, 2012 4:44 b 0
Garowe, July 21 – Habeennimada Talaadada ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bishaan July Waxaa si rasmi ah Radio Daljir uga bilaaban doona barnaamijkii Tartan iyo Tacliin oo sannadkasta aan idin soo gudbinno bisha barakaysan ee Ramadaan, kaasoo ay ku loolamaan dugsiyada sare ee Puntland.
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo uu idin soo gudbiyo Radio Daljir bisha Ramadaan, sannadkaan waxaaa ku tartami doona 24 dugsi sare oo laga kala xulay gobollada iyo degmooyinka Puntland, waxaana habeen walba ciyaari doona afar iskuul, waxaana ay noqon doonaan afarta iskuul ee habeenka ugu horraaya ciyaari doona kana kala tirsan Gruop-bada A iyo B,? Galbool Garowe iyo Al-nuur Badhan, iyo sidoo kale Muntada Buurtinle iyo Al-asar Qardho.
Dalladda waxbarashada ahliga ah ee Puntland ayaa maanta shaacisay qaab-tartameed dugsiyada sare ee Puntland, wakhtiga bilaabashada tartanka iyo isku-aadka iskuullada sare ee deegannada Puntland.
Guddoomiyaha guddiga barnaamijka Tartan iyo Tacliin, kana tirsan dalladda waxbarashada Puntland Ustaad Yuusuf Suudi Cabdi, ayaa maanta ku dhawaaqay qaabka tartanku u dhici doono, isagoo muujiyey muhiimadda tartankaasi iyo faa’idooyinka uu u leeyahay dadweynaha ku taxan.
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo ah barnaamij aqooneed miisaan leh waxaa iska kaashada Radio Daljir, Shirkadda Golis, Wasaaradda waxbarashada iyo Dalladda waxbarashada ahliga ee Puntland, kaasoo lagu kobciyo ummadda
Midawga Africa oo madaxda DKFS ku ammaanay ka go?naashaha soo af-jarida xilliga kumeel-gaarnimada.